Kuumba | Martech Zone
Svondo, Gunyana 24, 2006 Svondo, Gunyana 24, 2006 Douglas Karr
Vhiki rino ndanga ndichishanda pane logo uye bhizinesi / zvinodiwa chirongwa cheCompendium Software, kambani yandakatanga neyangu wandaishanda naye weSocial Media Optimization software. Ino inguva inonakidza. Tine tarisiro kubva kumafemu eVC, tine chiratidzo chikuru chechigadzirwa… chatinongoda inguva! Tese tiri vaviri tinoshanda nguva yakazara saka zvinonetsa kuti zviitwe.
Nezuro ndakavaka logo yekambani. Ndinovimba unoifarira!
Ongorora nzvimbo yedudziro yeCompendium.
Ndinogona here blog nezve chingwa?
Sep 24, 2006 na3: 53 PM
Ndiri kunhuwa gonzo. Mafuta makuru anonhuwa AIM3 rat kuti ive chaiyo. Kutsvaga kwangu paGoogle kwakauya kwakasviba; Ndingapa zano rimwe zita rekambani yako. Ini ndaimhanyawo. Kure. Tiza nekukurumidza kana AIM3 ari waunoshanda naye. Unoratidzika kunge uri munhu wekuvimbika nehunhu. Haasi. Uye SMO iri kumusoro kwayo yakakura mafuta kunhuwa mukoto. Kana isiri iyo AIM3… ndine hurombo nekupopotera waunoshanda naye.
Sep 25, 2006 na3: 04 PM
Izvo zvakanyanyisa kupenya kune kuravira kwangu, pamwe nemifananidzo yacho inondiyeuchidza zvakawanda nezve tambo yeDNA, pane vezvenhau…
Iyo yekubatanidza pane "ruzivo" inoenda yakananga kune yako blog; asi ndinofungidzira kuti ichi chinongedzo chingori chinobata nzvimbo…
Ndinofanira kutaura kuti ndinoda yekare Mac OS9 logo - musanganiswa mukuru wekubata kwevanhu, komputa, uye hushamwari / kudyidzana. Zvimwe chimwe chakadai?
Izvo zvakati, iyi ingori imwe pfungwa.
Symbols.com manyuko ekurudziro.